Ajụjụ - Hebei Ruimian Fabric Trading Co., Ltd.
90% Polyester 10% Fabric Owu
Uniform Unlọ Ọgwụ
Ejiri akwa akwa na-eyi ọrụ
Ee, anyị na-eji nkwakọ ngwaahịa mbubata dị elu mgbe niile. Anyị na-ejikwa mbukota ihe egwu pụrụ iche maka ngwongwo ndị dị ize ndụ na ndị na-ebu mmiri nchekwa oyi nwere nkwado maka ihe ndị na-emetụta okpomọkụ. Nkwakọ ngwaahịa ọkachamara na igwe anaghị eburu ọkọlọtọ nwere ike ibute ụgwọ ọzọ.
Faksị: 0086- (0) 311-67501546
Ajuju Maka Pricelist
Gịnị bụ Twill akwa?
A na-etinye mkpọchi na weft dịkarịa ala otu oge, a na-agbakwunye mkpọchi mmiri na weft na-agbanwe ịgbanwe akwa ma na-akpọkọta ha ọnụ dị ka twill weave. Ihe owuwu ahu bu abuo…
N'ogbe Osisi Egwuregwu akwa
Enwere akwa abụọ dị na akwa ọgwụ TPU a. Nke mbụ bụ akwa nke nkpa. Ọ bụ akwa a kpụrụ akpụ. Ngwunye dị ala bụ ihe nkiri TPU. Ọ na - eme ka akwa ahụ bụrụ nke ikuku na - enweghị mgbochi. Layerdị TPU dị nro na na-agbanwe ...
Ihe ngosi Vietnam
Na Eprel 10, ụlọ ọrụ anyị gara Vietnam ịbanye na ihe ngosi ahụ, na-egosi ngwaahịa bụ isi nke ụlọ ọrụ anyị: akwa akpa, akwa ihe mkpuchi ahụ, na-enye ndị ahịa ihe ngosi zuru oke nke ndị otu ...